ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့မှာသေချာတဲ့ ဆွန်းအိုဂုံ(လီဆောင်ဂီ)ရဲ့  “The King2Hearts” – Trend.com.mm
Posted on March 20, 2018 by Noel
လတ်တလော ကိုရီးယားမင်းသားတွေကြားမှာရေပန်းအစားဆုံးဆိုရင် ဆွန်းအိုဂုံလို့ပြောရမလားပဲ။ သိကြတယ်ဟုတ်! ကိုရီးယားပရိသတ်တွေတင်မက မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ အိုဂုံရဲ့ တော်ကီဖြစ်တဲ့ “လှတယ် ချစ်တာမို့လို့”ဆိုတဲ့စကားက တော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုထိလည်းဆွန်းအိုဂုံရဲ့ အရှိန်ကမသေသေးတာကြောင့် မင်းသားချော လီဆောင်ဂီရဲ့  ၂၀၁၂တုန်းကရုပ်ရှင်ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးတဲ့သူတွေရှိသလို မကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။မကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ ကားဟောင်းလေးဖြစ်ပေမဲ့ မင်းသားကိုသဘောကျတာကြောင့် မြန်မြန်လေးရှာကြည့်ကြမယ်
ရုပ်ရှင်ကားလေးနာမည်ကတော့ “The King2Hearts” ပါ။ဒါရိုက်တာ Lee Jae Kyoo နဲ့ Jung Dae Yoon တို့တွဲဖက်ရိုက်ကူးထားပြီးမင်းသားလီဆောင်ဂီ၊မင်းသမီး ဟာဂျီဝန်တို့က အဓိကမင်းသားမင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်အရံမင်းသားတစ်လက်ကတော့ ဂျိုဂျန်ဆုတ်ပါ။ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ မင်းသားလီဆောင်ဂီက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အိမ်ရှေ့စံမင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးလည်းစိတ်မ၀င်စား၊ဘုရင်လည်းမဖြစ်ချင်ပဲ
သူ့ဘာသာတစ်ယောက်တည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်သူတစ်ယောက်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘုရင်ကြီးကတော့ တောင်နဲ့မြောက်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်ရော၊အိမ်ရှေ့စံကို ရင့်ကျက်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးအတွက် စီစဉ်ထားတဲ့စစ်လေ့ကျင့်ရေးမှာ ပါဝင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
မင်းသမီးဟာဂျီဝန်ကတော့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့ သမီး၊အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။သိကြတဲ့အတိုင်း
တောင်နဲ့မြောက်က စည်းတားထားတာ အချိန်ကာလအတော်ကြာပါပြီ။ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းရေးအတွက်ပြုလုပ်တဲ့ စစ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတစ်ခုမှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်ဥာဏ်ပြာထွက်လွန်းတဲ့အိမ်ရှေ့စံနဲ့ တိုက်ရေးခိုက်ရေးကောင်းမွန်ပြီးစည်းကမ်းကြီး စနစ်ကျတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်မင်းသမီး တို့ကို တွေ့ဆုံပေးထားတာပါ။နိုင်ငံချင်းကွဲနေတဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားကခံယူချက်တွေ၊အယူဝါဒတွေကွဲပြားနေတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအကြိုက်ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ကြည်နူးစရာ ဒရာမာအခန်းတွေကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အချစ်၊ အလွမ်း၊ဟာသ ၊ အက်ရှင် အစုံအလင်ပါတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တာကြောင့် ကိုရီးယားကားကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးဖြစ်တယ် လို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
လတျတလော ကိုရီးယားမငျးသားတှကွေားမှာရပေနျးအစားဆုံးဆိုရငျ ဆှနျးအိုဂုံလို့ပွောရမလားပဲ။ သိကွတယျဟုတျ! ကိုရီးယားပရိသတျတှတေငျမက မွနျမာပရိသတျတှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ အိုဂုံရဲ့ တျောကီဖွဈတဲ့ “လှတယျ ခဈြတာမို့လို့”ဆိုတဲ့စကားက တျောတျောလေးအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ အခုထိလညျးဆှနျးအိုဂုံရဲ့ အရှိနျကမသသေေးတာကွောငျ့ မငျးသားခြော လီဆောငျဂီရဲ့၂၀၁၂တုနျးကရုပျရှငျကားလေးတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ကွညျ့ပွီးတဲ့သူတှရှေိသလို မကွညျ့ရသေးတဲ့ပရိသတျတှလေညျးရှိကွပါတယျ။မကွညျ့ရသေးတဲ့ပရိသတျတှကေတော့ ကားဟောငျးလေးဖွဈပမေဲ့ မငျးသားကိုသဘောကတြာကွောငျ့ မွနျမွနျလေးရှာကွညျ့ကွမယျ
ရုပျရှငျကားလေးနာမညျကတော့ The King2Hearts ပါ။ဒါရိုကျတာ Lee Jae Kyoo နဲ့ Jung Dae Yoon တို့တှဲဖကျရိုကျကူးထားပွီးမငျးသားလီဆောငျဂီ၊မငျးသမီး ဟာဂြီဝနျတို့က အဓိကမငျးသားမငျးသမီးအဖွဈပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။နောကျထပျအရံမငျးသားတဈလကျကတော့ ဂြိုဂနျြဆုတျပါ။ဇာတျလမျးပုံစံကတော့ မငျးသားလီဆောငျဂီက တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ အိမျရှစေံ့မငျးသားတဈယောကျပါ။ဒါပမေဲ့ နိုငျငံရေးလညျးစိတျမဝငျစား၊ဘုရငျလညျးမဖွဈခငျြပဲ
သူ့ဘာသာတဈယောကျတညျးပေါ့ပေါ့ပါးပါးနတေတျသူတဈယောကျအဖွဈသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ဘုရငျကွီးကတော့ တောငျနဲ့မွောကျပေါငျးစညျးရေးအတှကျရော၊အိမျရှစေံ့ကို ရငျ့ကကျြစခေငျြတဲ့အတှကျကွောငျ့ နှဈနိုငျငံပေါငျးစညျးညီညှတျရေးအတှကျ စီစဉျထားတဲ့စဈလကေ့ငျြ့ရေးမှာ ပါဝငျခိုငျးခဲ့ပါတယျ။
မငျးသမီးဟာဂြီဝနျကတော့ မွောကျကိုရီးယားနိုငျငံ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိတဈယောကျရဲ့ သမီး၊အထူးတပျဖှဲ့ဝငျအရာရှိတဈယောကျအဖွဈ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။သိကွတဲ့အတိုငျး
တောငျနဲ့မွောကျက စညျးတားထားတာ အခြိနျကာလအတျောကွာပါပွီ။ဒီဇာတျလမျးမှာတော့ နှဈနိုငျငံပေါငျးစညျးရေးအတှကျပွုလုပျတဲ့ စဈလကေ့ငျြ့ရေးသငျတနျးတဈခုမှာ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံက ဉာဏျနီဉာဏျနကျဉာဏျပွာထှကျလှနျးတဲ့အိမျရှစေံ့နဲ့ တိုကျရေးခိုကျရေးကောငျးမှနျပွီးစညျးကမျးကွီး စနဈကတြဲ့ မွောကျကိုရီးယား အထူးတပျဖှဲ့ဝငျမငျးသမီး တို့ကို တှဆေုံ့ပေးထားတာပါ။နိုငျငံခငျြးကှဲနတေဲ့အတှကျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွားကခံယူခကျြတှေ၊အယူဝါဒတှကှေဲပွားနတောကိုလညျးမွငျတှရေ့မှာဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေကွိုကျရနျဖွဈလိုကျပွနျခဈြလိုကျနဲ့ကွညျနူးစရာ ဒရာမာအခနျးတှကေိုလညျး မွငျတှရေ့မှာပါ။ အခဈြ၊ အလှမျး၊ဟာသ ၊ အကျရှငျ အစုံအလငျပါတဲ့ဇာတျကားလေးဖွဈတာကွောငျ့ ကိုရီးယားကားကွိုကျတဲ့ ပရိသတျတှလေကျမလှတျသငျ့တဲ့ရုပျရှငျကားလေးဖွဈတယျ လို့အကွံပွုလိုကျပါတယျ။